Zyro: Yakha ngokulula indawo yakho okanye iVenkile ye-Intanethi Ngeli qonga lifikelelekayo | Martech Zone
Ukufumaneka kwamaqonga okuthengisa afikelelekayo kuyaqhubeka nokuchukumisa, kunye neenkqubo zolawulo lomxholo (CMS) azahlukanga. Ndisebenze kwinani labanini, umthombo ovulekileyo, kunye nokuhlawula amaqonga eCMS kwiminyaka edlulileyo… ezinye ziyamangalisa kwaye ezinye zinzima kakhulu. Ndide ndifunde ukuba zeziphi iinjongo zabathengi, izixhobo, kunye neenkqubo, andenzi ngcebiso malunga nokuba leliphi iqonga emandilisebenzise.
Ukuba ulishishini elincinci elingakwaziyo ukulahla amashumi amawaka eedola kubukho bewebhu, kunokwenzeka ukuba usebenzise amaqonga alula angafuni khowudi kwaye unokhetho olukhulu lweetemplate oza kuzenza ngokwakho.
Xa ndiseta i indawo ye-spa kunyaka ophelileyo, ndasebenzisa iqonga endandisazi ukuba liya kubonelela ngenkxaso kunye nezixhobo zolawulo ezifunwa ngumxhasi wam. Kwakungekho ndlela yokuba ndiza kwakha isiza esifuna ukugcinwa rhoqo, uhlaziyo, kunye nokuqhubeka nokuphucula... kuba umnini wayengenakho ukuhlawulela elo nqanaba lenzame.
Zyro: Yakha iWebhusayithi, iVenkile ye-Intanethi, okanye iPotfoliyo
Esinye isisombululo esifikelelekayo kakhulu zyro. I-Zyro inamaxabiso ahlanganisiweyo kunye ne-no-risk, i-30-day-back-back guarantee. Ude ufumane inkxaso ye-24/7 yengxoxo kunye nesicwangciso ngasinye!
ukusingatha -Akukho mfuneko yokuya kufumana umboneleli wokubamba, iqonga likaZyro libandakanyiwe. Unokufumana isizinda sakho ngenkonzo yabo simahla kunye neepakethe ezithile.
itemplates -Zonke iitemplate zeZyro zenziwe zalungiswa kwaye ziyaphendula ngeselula. Qala nge template engenanto, okanye ukhethe kwiitemplates zevenkile, iitemplates zenkonzo yeshishini, iitemplates zokufota, iitemplates zokutyela, iipotfoliyo zeepotfoliyo, i-templates resume, i-templates yesiganeko, i-templates yekhasi lokufika okanye i-blog templates.
Tsala-kwaye-Jongisa uMhleli -Akukho khowudi iyimfuneko, unolawulo olupheleleyo lokuyila kunye neetemplate ezenziwe ngumyili ezinokuthi zenziwe ngokwezifiso kwi-brand yakho kunye nomyalezo.
UkuSebenza kweeNjini zoPhando – Zyro's iqonga lolawulo lomxholo linazo zonke iimpawu iyimfuneko yokwandisa indawo yakho okanye ukugcina iinjini zokukhangela.
Umbhali we-AI – Hayi umbhali obalaseleyo? Ngokulula awukwazi ukufumana ixesha lokubhala? Vumela uMbhali we-AI enze umbhalo wewebhusayithi yakho ngelixa uyakha.
eCommerce -Iphakheji epheleleyo ye-ecommerce, kubandakanya ukusetyenzwa kwentlawulo, ukudityaniswa kweenqanawa, umphathi wobudlelwane nabathengi (CRM), ii-imeyile ezizenzekelayo, kunye nokunika ingxelo. Ivenkile yakho inokudityaniswa ngokulula kwiAmazon, Facebook, kunye ne-Instagram.
ukhuseleko -IiSayithi zikhuselwe ngokupheleleyo ngesatifikethi sakho se-SSL kunye ne-HTTPS encryption, kwaye intengiselwano ye-ecommerce ikhuselwe ngokunjalo.
Ingxelo enzulu -Fumana apho kuvela khona itrafikhi kwaye uphucule uguqulo lwakho ngezixhobo ezinje ngoGoogle Analytics, Kliken, kunye neMoneyData.
I-Zyro inenani lezicwangciso ezifikelelekayo ngaphandle kweendleko ezifihliweyo.
I-Zyro inomnikelo wangoLwesihlanu omnyama oqala ngoNovemba 15 ukuya kwi-7 kaDisemba… sebenzisa ikhowudi ZYROBF kwaye wonge ukuya kuthi ga kwi-86%!
Zama iZyro Mahala!
Ukubhengezwa: Ndililungu le zyro kwaye ndisebenzisa ikhonkco lokudibana kweli nqaku.
tags: ivenkile yeAmazonCMSInkqubo yolawulo lomxholoyenze ngokwakhothambekatsala-uwise umhlelieCommerceUkusebenza kwe-ecommerceiqonga le ecommerceEzentengisoI-instagram yorhweboLweencwadilawulo lwezintoonline storeumakhi wevenkile ekwi-intanethiiqonga levenkile ye-intanethiumakhi wewebhusayithi ye-intanethiUkulungiswaindawo yepotifoliyoSEOiinkonzo zokuhambisaezentengisoIitemplate zewebhusayithizyro